अब अति भो पाँचथान कमरेडहरु…
By administrator on	 December 16, 2020 BREAKING NEWS, विचार-अन्तरवार्ता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा विवाद उत्कर्समा छ । शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेब गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकार सञ्चालनमा ‘हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने’ रणनीतिमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्न सक्नु भएन । र, आफुले पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्नु भएन । आफ्नो स्वार्थ समुहभन्दा बाहिर निस्किएर हेर्न सक्ने सबैले यो बुझेका छन् ।
नेकपाको माधव नेपाल गुटका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि त्यसलाई संसदको सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गरिदिने चेतावनी दिनु भएको छ । रिजालले ट्वीटमा लेख्नु भएको छ, ‘हाम्रो संविधानले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषदको सन्तुलनकारी संरचना अध्यादेशमार्फत् भत्काइए पनि संसदीय सुनुवाइ कायम छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर यसले नजीर स्थापना गरिसकेको छ ।’
उहाँको यो ट्वीटले प्रष्ट हुन्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिने नियत छ । तर, यो नियत आजको होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै माधब नेपाल गुटमा हिनता बोध छ । उहाँले पार्टीको र मुलुकको नेतृत्व गर्दा उल्लेख्य काम गर्न सक्नु भएन । अहिले ओलीले गरेका काम देखेर उहाँमा जलन छ । त्यो विभिन्न तरिकाले प्रकट भइरहेको छ ।
सरकारले गरेका राम्रा कामले नेपाली कांग्रेस भन्दा नेकपाका नेतालाई बढी जलन भएको छ । आफ्ना समकालिन नेता ओलीको देशविदेशमा बढेको कदले उहाँहरु होचो देखिनु भएको छ । त्यसले नेकपा सचिवालयका नेतामा ग्लानी छ । पद, प्रतिष्ठालाई ३० वर्षदेखि आफ्नै पेरिफेरिमा राख्न सफल पाँच जना शीर्ष नेतालाई त्यो शक्ति ओलीमा सरेको स्वीकार्य छैन । यो नै हो नेकपाको विवाद पनि । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय विभाग ५ वर्षसम्म बनाउन सक्नु भएन । अहिले उहाँ नै ओलीलाई अर्ति दिएर ट्वीट गर्दै हुनुहुन्छ, सभामुखलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन भनेर ।
आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने कुरामा नलाग्नु भएका नेताहरु दुईतिहाई नजिकको सरकारले संबैधानिक निकायमा पद खाली हुँदा पनि नियुक्ति दिन सकेन भनेर अलापविलापमा हुनुहुन्छ । हिजो देउवा बैठकमा नआउँदा संबैधानिक निकायमा नियुक्ति भएन । आज देउवा आउने भएपछि आफ्नो स्वार्थ समुहका कार्यकर्ता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठकमा जान नदिएर राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेलमा लाग्नुभयो । त्यसलाई चिर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा आकाशै खसे जसरी विलापमा हुनुहुन्छ ।
सरकारलाई केही गर्न नदिने कामले पाँचथान नेताको स्वार्थ सिद्ध त होला, तर नेपाली जनताले धिकार्ने काम हो त्यो । हाल जागिर पाउन नसकेका तर जागिरका आकांक्षी नेकपाका कार्यकर्ता र हिजो चुनावमा टिकट नपाएका तथा जित्न नसकेका पार्टीका तेस्रो तहका नेता ‘हम त चले सनम, आप को ले जाइङ्गे’ रणनीतिमा छन् । कसरी पार्टीका नेतालाई उकास्ने र विवाद बढाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।
देश र जनताको बारेमा सोच्ने हो भने हिजो चुनावमा जित्न नसकेका कमरेडहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेब गौतमलाई राष्ट्रियसभा सांसदको जागिर नहुँदा के नै फरक पथ्र्यो र ? उहाँहरुलाई ल्याउनका लागि चोर बाटो खोज्नु पर्ने, सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नहुने भन्ने हो र ? नैतिकताको पाठ पढाउनेहरुले आफंैतिर फर्किएर आफु कति नैतिक छु भन्ने हेर्नु पर्दैन ?
कुनै पनि ठाउँको जागिर कसैका लागि सधैंको होइन, त्यो प्राइभेट कम्पनी पनि होइन । आजका नियुक्ति हिजोदेखि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गरेका धेरै जनाले खालान् । नारायणकाजी, बामदेब, विना मगर लगायत पनि जागिरमै हुनुहुन्छ नि । हिजो प्रचण्ड र माधब नेपाललाई सहयोग गर्नेहरुले जागिर खाएकै हो, भोलि पनि खाने तपाईंहरु नै हो, अहिले के को यो अति रडाको ? विष्णु रिजालजीको ट्वीट जस्ता धम्कीले जति गलाउन सकिन्छ, त्यति गलाएर जागिरे थप्ने त हो नि । यसबाट सामान्य नागरिकलाई के फरक पर्छ र ?
नागरिकलाई फरक पर्ने गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाले हो । त्यो काममा ३९६ वटा अस्पताल एकै पटक निर्माण सुरु गर्ने, फुसको छानो हटाउने, जग्गा भएका विपन्नलाई घर बनाइदिने, बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने, दलित, भुमिहिन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने, जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता बढाउने, भौतिक पूर्वाधारका काम तीब्र बनाउने लगायतका काम त श्रदेय अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा भइरहेकै छ । भ्रमको खेती कति दिन टिक्छ र ?
शीर्ष नेताज्युहरु, अब अति भो सच्चिने कहिले ? जति नै अध्यक्ष ओलीको विरोध गरे पनि तपाईंहरुको कद बढ्दैन बरु जनताको नजरमा घटेको छ । बेलैमा चेत आए भोलि तपाईंहरुले जागिर खाने हो । नभए देउवाका दिन फिर्ने हुन् । कागलाई : बेल पाक्ता हर्ष न विस्मत ।
चक्रपथ अनलाइनबाट ।